Hordhac: Chelsea Vs Aston Villa – Blues Oo U Dagaallamaysa Inay Kusoo Laabto Jidka Guusha, Shaxaha Macquulka Ah Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Labada Kooxood - Gool24.Net
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa Stamford Bridge ku qaabilaysa kooxdii usbuucii hore jilbaha dhulka u dhigtay Manchester United ee Aston Villa, waxaana uu Frank Lampard wax walba u samayn doonaa in kooxdiisu hesho guul si ay uga soo kabato niyad-jabkii kasoo gaadhay ciiyaartii West Ham ay guul-darrada adag ugu xambaarisay.
Chelsea oo ay iskugu xig-xigeen guulo la’aan kasoo gaadhay Manchester City oo 2-1 ugu dhiibtay, barbar-dhac ay la galeen Valencia iyo West Ham oo 1-0 kaga badisay, ayaa waxay ku qasban tahay inay kaga farxiso garoonkeeda Stamford Bridge, si ay u adkaysato kaalinteeda afraad oo ay lix dhibcood ka horreyso kooxda kusoo xigta ee Tottenham oo lix dhibcood ka dambaysa.
Marka ay Aston Villa kala baxaan, waxa kusoo fool leh Everton iyo Bournemouth oo inta ka horreysa Ciidda Masiixiga ay kala calaf-qaadi doonaaan.
Ciyaarta: Chelsea vs Aston Villa
Tartanka: Premier League, kulamada 15aad
Waqtiga: 10:30 PM – Saacadda Geeska Afrika
Garsooraha: Christopher Kavanaphh
Dhaliyaha da’da yar ee Tammy Abraham oo dhaawac ku seegay ciyaartii Sabtidii ayaa awoodi kari waayey inuu kasoo kabto dhaawacaas, waxaanu mar kale seegayaa ciyaarta maanta oo u ahayd fursad uu kaga hor tegi karo kooxdii uu amaahda ugu ciyaarayey xili ciyaareedkii hore ee Aston Villa.
Laakiin waxa uu Lampard dib u helayaa Cesar Azpilicueta, N’Golo Kante iyo Willian oo kusoo bilaaban doona kaddib markii ay kaydka ku jireen kulankii West Ham.
Antonio Riduger iyo Ross Barkley ayaa labadooduba u dhow inay kasoo laabtaan dhaawacyo fudud oo haleelay, hase yeeshee waqtiga oo ku gaaban awgeed ayaanay taam ugu noqonin kulanka, waxaana la filayaa in toddobaadka soo socda ay siiyaan Lampard fursado uu ku kala dooran karo ciyaartoygiisa.
Dhinaca kooxda martida ah, Frederic Gulbert ayaa ganaax hal kulan ah ku maqnaanaya maadaama ay u buuxsameen tirada shan kaadh oo digniin ah.
Anwar El Ghazi oo dhaawac ah ayaa waxa booskiisa ku loollamaya Ahmed Elmohamady iyo Trezeguet, halka Marvelous Nakamba uu khadka dhexe kula dagaaallami doono Daouglas Luiz iyo Conor Hourihane.